ချီလီနိုင်ငံက အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ၁၉၆၂ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ
ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ သမိုင်းကြောင်းများ အပိုင်း (၇)
12 Jun 2018 . 6:27 AM
(၂)ကြိမ်ဆက်တိုက် ဥရောပတိုက်မှာ ပြိုင်ပွဲကျင်းပခဲ့လို့ အခုတစ်ကြိမ်မှာတော့ တောင်အမေရိကတိုက်မှာ ပြိုင်ပွဲပြောင်းလဲ ကျင်းပဖို့ ဖီဖာတာဝန်ရှိသူတွေ ဆုံးဖြတ်ခဲ့လို့ အနောက်ဂျာမနီရဲ့ အိမ်ရှင်လျှောက်ထားမှုကို ငြင်းပယ်ကာ ချီလီနိုင်ငံက အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲမကျင်းပခင် (၂)နှစ်အလိုမှာ လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ ၁၉၆၀ ချီလီငလျင်ကြောင့် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု အများအပြား ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ ငလျင်ဒဏ်သင့်ခဲ့ပေမယ့် ချီလီနိုင်ငံက ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲအတွက် လက်မလျော့ခဲ့လို့ ဖီဖာက အိမ်ရှင်မပြောင်းလဲတော့ဘဲ ချီလီနိုင်ငံမှာပဲ ကျင်းပပြုလုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
အုပ်စုတွင်း ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်တဲ့ အိမ်ရှင်ချီလီအသင်းနဲ့ အီတလီတို့ ကစားခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်ဟာ ကြမ်းတမ်းတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေနဲ့ ရုပ်ဆိုးအကျည်းတန်ခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီး ‘Battle of Santiago’ လို့ အမည်တွင်ခဲ့ပါတယ်။ ဗိုလ်လုပွဲအဆင့်ကို လက်ရှိချန်ပီယံ ဘရာဇီးလ်အသင်းနဲ့ ချက်ကိုဆလိုဗက်ကီးယားအသင်းတို့ တက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပြီး ဘရာဇီးလ်အသင်း (၃-၁)ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရကာ ထပ်ဆင့် ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ချန်ပီယံဆုကို ကာကွယ်နိုင်ခဲ့တဲ့ ဘရာဇီးလ်အသင်းကတော့ ၁၉၃၈ ပြိုင်ပွဲမှာ ချန်ပီယံဆုကို ကာကွယ်နိုင်ခဲ့တဲ့ အီတလီအသင်းအပြီး ဒုတိယမြောက် ချန်ပီယံကာကွယ်နိုင်တဲ့ အသင်းအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ သမိုင်းကြောင်းတွေကို ပြိုင်ပွဲကျင်းပခဲ့တဲ့ နှစ်အလိုက် အပိုင်းဖြင့် နေ့စဉ်ဖော်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အပိုင်း (၈)ကို နောက်ရက်မှာ ဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် . . .
Host Country – Chile
Dates – 30 May – 17 June (19 days)
Venue(s) –4(in4host cities)
Champions – Brazil (2nd title)
Third Place – Chile
Fourth Place – Yugoslavia
Attendance – 893,172 (27,912 per match)
Top Scorer(s) –6players (4 goals each)
Best Young Player – Flórián Albert (Hungary)
Photot:FIFA World Football Museum, Football Memories
ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲ သမိုငျးကွောငျးမြား အပိုငျး (၇)
(၂)ကွိမျဆကျတိုကျ ဥရောပတိုကျမှာ ပွိုငျပှဲကငျြးပခဲ့လို့ အခုတဈကွိမျမှာတော့ တောငျအမရေိကတိုကျမှာ ပွိုငျပှဲပွောငျးလဲ ကငျြးပဖို့ ဖီဖာတာဝနျရှိသူတှေ ဆုံးဖွတျခဲ့လို့ အနောကျဂြာမနီရဲ့ အိမျရှငျလြှောကျထားမှုကို ငွငျးပယျကာ ခြီလီနိုငျငံက အိမျရှငျအဖွဈ လကျခံကငျြးပခှငျ့ရရှိခဲ့ပါတယျ။ ပွိုငျပှဲမကငျြးပခငျ (၂)နှဈအလိုမှာ လှုပျခတျခဲ့တဲ့ ၁၉၆၀ ခြီလီငလငျြကွောငျ့ နိုငျငံတဈဝှမျး ပကျြစီးဆုံးရှုံးမှု အမြားအပွား ဖွဈပျေါခဲ့ပါတယျ။ ငလငျြဒဏျသငျ့ခဲ့ပမေယျ့ ခြီလီနိုငျငံက ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲအတှကျ လကျမလြော့ခဲ့လို့ ဖီဖာက အိမျရှငျမပွောငျးလဲတော့ဘဲ ခြီလီနိုငျငံမှာပဲ ကငျြးပပွုလုပျဖို့ ဆုံးဖွတျခဲ့ပါတယျ။
အုပျစုတှငျး ပှဲစဉျတဈပှဲဖွဈတဲ့ အိမျရှငျခြီလီအသငျးနဲ့ အီတလီတို့ ကစားခဲ့တဲ့ ပှဲစဉျဟာ ကွမျးတမျးတဲ့ဖွဈရပျတှနေဲ့ ရုပျဆိုးအကညျြးတနျခဲ့တဲ့ ပှဲစဉျတဈပှဲဖွဈခဲ့ပွီး ‘Battle of Santiago’ လို့ အမညျတှငျခဲ့ပါတယျ။ ဗိုလျလုပှဲအဆငျ့ကို လကျရှိခနျြပီယံ ဘရာဇီးလျအသငျးနဲ့ ခကျြကိုဆလိုဗကျကီးယားအသငျးတို့ တကျရောကျနိုငျခဲ့ပွီး ဘရာဇီးလျအသငျး (၃-၁)ဂိုးနဲ့ အနိုငျရကာ ထပျဆငျ့ ခနျြပီယံဖွဈခဲ့ပါတယျ။ ခနျြပီယံဆုကို ကာကှယျနိုငျခဲ့တဲ့ ဘရာဇီးလျအသငျးကတော့ ၁၉၃၈ ပွိုငျပှဲမှာ ခနျြပီယံဆုကို ကာကှယျနိုငျခဲ့တဲ့ အီတလီအသငျးအပွီး ဒုတိယမွောကျ ခနျြပီယံကာကှယျနိုငျတဲ့ အသငျးအဖွဈ မှတျတမျးဝငျခဲ့ပါတယျ။ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲ သမိုငျးကွောငျးတှကေို ပွိုငျပှဲကငျြးပခဲ့တဲ့ နှဈအလိုကျ အပိုငျးဖွငျ့ နစေ့ဉျဖျောပွပေးသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။ အပိုငျး (၈)ကို နောကျရကျမှာ ဆကျလကျဖျောပွပေးသှားမှာ ဖွဈပါတယျ . . .